China bhaira chiwanikwa pombi chiwanikwa chiwanikwa simbi musono mutopota chitoko fekitari uye bhizimisi | Hongyi
Bhaira chiwanikwa pombi chiwanikwa simbi isina musono pombi stock
Yakakwira-kumanikidza chiwanikwa pombi mamakisi: 15 crmog, 12 cr2mog, 12 cr1movg, 12 cr2mowvtib, 10 cr9mo1vnb, SA210A1, SA210C, SA213 T11, SA213 T12, SA213 T22, SA213 T23, SA213 T91, SA213 T92, ST45.8 / Ⅲ 13 crmo44, 10, 15 mo3, crmo910.
Product zita Mashoko Standard Tsanangudzo Kushanda
Chiwanikwa simbi mutopota 12Cr1MoVG
JISG3458-88 -128-1240 * 1-200 tembiricha yakakwira, tembiricha yakadzika uye kurwisa kwehurosi mu petrochemical yemagetsi bhaira indasitiri
Low tembiricha pombi 16MnDG, 10MnDG, 09DG
ASTM A333 -128-1240 * 1-200 45 ~ -195 yakadzika tembiricha yekumanikidza mudziyo pombi uye yakadzika tembiricha kupisa exchanger pombi
Yakakwira-kumanikidza bhaira chubhu 20G
DIN17175-79 -128-1240 * 1-200 pombi yekupisa, kuunganidza bhokisi uye pombi yemhepo yekumanikidza bhaira
hHigh kumanikidza fetereza pombi
16Mn GB6479-2000 -128-1240 * 1-200 makemikari michina uye mapaipi ane anoshanda tembiricha ye -40--400 uye kushanda kumanikidza kwe10-32mpa
Yakadzika-yepakati kumanikidza pombi
16Mn<Q345A.B.C.D.E> GB3087-2008 -128-1240 * 1-200 kugadzira yakaderera uye yepakati kumanikidza bhaira uye locomotive bhaira
Dhirivhari pombi 10 #, 20 #
ASTM A53 -128-1240 * 1-200 General musono simbi chubhu yakakodzera kuendesa mvura
General chimiro chubhu 10 #, 20 #, 45 #, 27SiMn
ASTM A53 -128-1240 * 1-200 Inoshanda kune yakajairika mamiriro, mainjiniya ekutsigira machining, nezvimwe
Chiwanikwa pombi mhando isina musono simbi mutopota. Chiwanikwa pombi inogona kukamurwa isina musono pombi yekuumbwa kwesimba uye yakanyanya kumanikidza kupisa-kusagadzikana chiwanikwa pombi. Zvakasiyana neyakajairika yekugadzira uye indasitiri yealloy machubhu, echimakanika maficha emachubhu anochinjiswa neannealing uye tempering. Wana mamiriro anodikanwa ekugadzirisa. Mashandiro ayo akakwirira kupfuura eayo ese musono simbi chubhu, kemikari kuumbwa kweiyo alloy chubhu ine zvimwe Cr, yakanyanya tembiricha yekudzivirira, yakaderera tembiricha kuramba, ngura kuramba.Hakuchina chiwanikwa chiumbwa kana mashoma chiwanikwa chiumbwa mune yakawanda kabhoni musono chubhu. Icho chikonzero nei chiwanikwa chubhu chinoshandiswa zvakanyanya mu petroleum, muchadenga, indasitiri yemakemikari, simba remagetsi, bhaira, indasitiri yemauto uye mamwe maindasitiri ndeyekuti michina yezvinhu zveacloy tube inochinja zvakanaka uye kugadzirisa zvakanaka.
Alloy pombi inonyanya kushandiswa kupisa pamusoro pombi yepasi uye yepakati kumanikidza bhaira (kushanda kumanikidza hakuwanzo kupfuura 5.88mpa, tembiricha yekushanda iri pazasi pe450 ℃); Inoshandiswa pakupisa pombi dzepasi, economizers, superheaters, dzimba dzekudzidzira uye mapaipi e petrochemical indasitiri yeakanyanya mafirita (kushanda kumanikidza kazhinji kuri pamusoro pe9.8mpa uye tembiricha yekushanda iri pakati pe450 ℃ ~ 650 ℃).
Chiwanikwa simbi chubhu inowanzoshandiswa musimba chirimwa, simba renyukireya chirimwa, yakanyanya kumanikidza bhaira, yakanyanya tembiricha superheater, reheater uye imwe yakanyanya kumanikidza uye yakakwira tembiricha mapaipi nemidziyo, inogadzirwa yemhando yepamusoro kabhoni simbi, chiwanikwa simbi simbi uye isina kupisa- nemishonga simbi, mushure inopisa rinopfungaira (extrusion, kuwedzera) kana kutonhora rinopfungaira (mufanidzo).
Inogona kuve 100% yakashandiswazve, zvinoenderana nezano renyika rekuchengetedza zvakatipoteredza, kuchengetedza simba uye kuchengetedza zviwanikwa. Sangano renyika rinokurudzira kuwedzerwa kwenzvimbo yekushandisa yeakanyanya kumanikidza chiwanikwa pipe.MuChina, chikamu chechidimbu chepombi yekushandisa mune yakazara simbi vhoriyamu inongova hafu yeiyo munyika dzakabudirira. Kuwedzera kwesimbi yekushandisa pombi yekushandisa kunopa nzvimbo yakakura yekuvandudza iyo indasitiri.Kuenderana nekutsvagiswa kweboka rehunyanzvi rebazi realloy pombi reChina Special Steel Association, kudiwa kwepombi yekumanikidza yealloy muChina kuchawedzera ne10- 12% pagore mune ramangwana.
Pashure: Yakakwira chaiyo kutonhora yakadhonzwa chaiyo simbi pombi isina musono simbi chubhu
Zvadaro: Yakaputirwa simbi yekuvaka simbi kabhoni simbi simbi ndiro yemutengo